Wasiirka Maaliyadda oo sheegay inuu gabagabo marayo Tirakoob ay ku sameynayaan hantida guud ee Dowladda – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasiirka Maaliyadda oo sheegay inuu gabagabo marayo Tirakoob ay ku sameynayaan hantida guud ee Dowladda
By aaheybe / May 21, 2019 May 21, 2019
Muqdisho (SONNA) Shir saxaafadeed uu Muqdisho uga qabtay Warbaahinta Wasiirka Maaaliyada Xukuumada federaalka Soomaaliya Dr abdiraxman Ducaale Beyle ayuu kaga hadlay tirakoobka Hantida ummadda, Guulaha Soomaaliya ay ka gaartay wada hadalka deyn cafinta iyo Muhiimada ay leedahay isku tashiga Umadda.
Wasiirka ayaa ugu horeyn dul istaagay Warbixinta ugu dambeysay ee Hey’adda lacagta aduunka ka soo saartay Barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya ee ka gudbida Wajiga Sedexaad ee Barnaamijka.
"Waxaan maanta ummadda Soomaaliyeed iyo Warbaahintaba la wadaagay faah faahinta warqadii ugadambeysay ee ka soo baxday ‘IMF’ International Monetary Fund, anigoo hore idiinkugu sheegay 9kii bishaan in ay soo bixidoonto Warbixintaan oo ka koobneyd Amaan iyo Bogaadin tilmaameysay horumarka Maaliyadeed ee Dalka ee aan gaarnay".ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka Maaliyadda ayaa sidoo kale soo hadal qaaday tirakoob ay Wasaaradda ku hayso hantida ummadda waxaana uu sheegay inuu gabagabo marayo.
Wasiir Beyle ayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fakaraan amaanka hantidooda waxaana uu tilmaamay in halka ugu wanaagsan ay tahay in waddanka kooda ku malgashadaan si ay ugu badbaado bulshadana uga faa’iido.
"Dhanka kale waxaan Dadka Soomaaliyeed u sheegay in baahi weyn loo qabo in ay Maalgalin ku sameeyaan Dalkeena Soomaaliya oo ay Muruqooda, Maskaxdooda iyo Maalkoodaba u huraan, sidoo kale waxaan Baaq iyo dhiiri galin u jeediyay ganacsatada Soomaaliyeed ee Dibadda ku nool in ay hantidooda ilaashadaan oo meel amaan ah ku hubsadaan".ayuu yiri Wasiirka.
In badan oo ka mid dadka wax heysta ee Soomaaliyeed ayaa ganacsiyo ka sameeyay dalal badan oo dunida ah gaar ahaan qaaradaan Afrika waxaana ay la kulmaan dhibaatooyin joogta oo isugu jira dil, dhac iyo boob waxaase la isweydinayaa waqtigaan oo dalkoodu soo kabanayo maxaa ka hortaagan inay ku ku soo noqdaan waddankooda oo maalgalinta uga baahi badan, hantidooda ugu amaan badan dalalka ay ganacsiyada ka sameeyeen.